Vaovao - Jiangxi Flor dia nahazo ny anaram-boninahitra "Vondrona mandroso amin'ny rafitra indostrialy sy fampahalalam-baovao hiadiana amin'ny pnemonia coronary vaovao"
Tamin'ny alàlan'ny fankatoavan'ny governemanta foibe, ny Minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalana vao haingana dia nidera andiana antokon'olona mandroso sy olona efa mandroso izay nipoitra tamin'ny ady tamin'ny areti-tratra pnemonia. Jiangxi Flor dia nahazo ny anaram-boninahitra "mandroso miaraka amin'ny ady amin'ny pnemonia satroboninahitra vaovao amin'ny rafitra indostrialy sy fampahalalam-baovao" (Telo monja ao amin'ny faritanin'i Jiangxi).
Mpitsabo maro no voan'ny virus ary nanome ny ainy sarobidy aza. Mampiasa ny fiainany izy ireo handikana ny fikasana voalohany nataon'ny Kaominista sinoa hanompo ny vahoaka amin'ny fony manontolo fa tsy hatahotra sorona. Izy ireo no hazondamosin'ny firenena. Indray mandeha, niaraka tamin'ity toe-tsaina ity, nitarika ny vahoaka handresy ireo fahavalo mahery vaika tamin'ny alàlan'ny zava-tsarotra sy loza maro ny antokonay, ary nampiorina ny vahoaka sinoa, tonga manan-karena sy matanjaka.
Tamin'ny fiandohan'ny taona, Jiangxi Flor dia namaly tamim-pahavitrihana ny antson'ny antoko sy ny fanjakana manoloana ny valanaretina satro-boninahitra vaovao mampatahotra. Tamin'ity taona ity, ny mpiasan'ny Jiangxi Flor rehetra dia niara-niasa tamin'ny tafiotra sy ny fotoan-tsarotra, nanolo-tena tamin'ny "valan'aretina ady", ary nampihatra ny soatoavin'ny fotony: ny antony sy ny vokany, ny fahendrena, ny fanavaozana ary ny fiantrana amin'ny ady sarotra. Ny voninahitra avy amin'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana dia nanome aingam-panahy indray ny "flore" rehetra! Hanaraka tsy am-pihambahambana ny fanaparitahana sy ny zavatra takian'ny Komity foiben'ny antoko izahay, tsy hanadino ireo fanirianay tany am-boalohany, hitadidy ny iraka ampanaovina anay ary handray anjara amin'ny tanjaka ara-tsiansa sy teknolojia an'ny orinasam-pirenena.